Kwachaa kwachaa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Kwachaa kwachaa
Kwachaa kwachaa: okwu, atụmatụ, atụmatụ
Ihe mgbaru ọsọ nke ubi ubi ọ bụla bụ inweta ezigbo owuwe ihe ubi. Ma iji mezuo nke a, ọ dị mkpa ịrụ ọrụ nke ọma. Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-elekọta osisi na saịtị ahụ nwere osisi plum. Ụmụaka na ndị okenye nwere mmasị ịmị mkpụrụ ya. A na-ejigharị ahịhịa na compotes, a na-eme jam, plums nwekwara ọgwụ ọgwụ.
Mkpuru ụlọ: nkọwa, dabara na nlekọta
Onye ọ bụla maara ihe a piom anya. Nke a bụ osisi kachasị mma nke ndị na-elekọta ubi maka mkpụrụ osisi dị mma ma dị mma. O nwere uru bara uru, nke bara uru na mineral na vitamin. Plọp pulp nwere potassium, fluorine, sodium, protein, eri nri, carbohydrates, vitamin B1, B2, C, E, na PP. Iji plums achọpụtala ebe ọ nọ na nkà mmụta ọgwụ.